Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya Shir Madaxeedka 26aad ee Midowga Afrika. | Haldoornews
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya Shir Madaxeedka 26aad ee Midowga Afrika.
January 30, 2016 - Written by admin
Addis-ababa(Haldoornews)-Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalinimadii shalay ka degay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo uu kaga qeybgeli doono Shir MadaxeedkII 26-aad ee Midowga Afrika.
Shir Madaxeedka Midowga Afrika ayaa arrimaha ugu waaweyn ee lagu soo qaadi doono waxaa ka mid ah colaadaha ka aloosan dalalka Burundi iyo Koonfuurta Suudaan.
Madaxa Guddiga Sare ee Midowga Afrika, Nkosazana Dlamini-Zuma ayaa dhankeeda waxay xusuusisay madaxda Afrika in laga dhabeeyo, lana fuliyo balanqaadkii hore loo gaarey ee ahaa in qaaradda Afrika laga ciribtiro colaadaha,marka la gaaro sannadka 2020.